Abaklami Modern musa usukhathele ukuthuthukisa enjalo ijwayelekile eziningi knitters umkhiqizo njengoba obucayi doily ukukhilosha. Naphezu wonke umlando omude wesizwe lezi zinto ezincane zokuhlobisa, nezindlela zabo eyinkimbinkimbi esakwazi kusimangaze knitters ngisho abanolwazi.
A Swayipha elula
seamstresses Novice, knitters kanye nalabo okuyiwona eseyintsha futhi okwakhe lephethini akuyona elinenani elikhulu, ngokuvamile baya elula openwork ukukhilosha napkins. Imidwebo nencazelo imikhiqizo zibala ukuphindaphindwa izici ezifanayo kanye nesakhiwo kunalokho okuyisidina. Ngokuvamile, iphethini yakhiwa:
izakhi eziyisithupha kuya nambili ezinkulu (accent);
uchungechunge eziningana okuqhubekayo;
Strapping njengoba amazinyo noma amagagasi.
Enye ingxenye kaningi usula kuyinto anezikhala elula (noma openwork yayo amaphethini esikhundleni). Ngalo, onjiniyela kungandisa noma ukunqinda napkins. Inqubo efanayo kodwa ebafundisa amakhosi amaningi.
Indlela ukunciphisa noma ukwandisa napkin?
I isithombe esingezansi sibonisa i openwork ukukhilosha doily ezithakazelisayo futhi kahle elula.
Incazelo inqubo ukunwetshwa ndwangu ukufaka imigqa eyengeziwe wenza openwork iphethini.
indwangu Little ise ekhoneni elingenhla esinxeleni circuit, kuhlanganisa izinto ezilandelayo:
openwork iphethini (imigqa 4);
flat strip uchungechunge;
izingxenye ezengeziwe kufanele kwetfulwe ukwandisa ubukhulu bayo. Ngemva izigaba lokuqala nelesibili usebenze isethi eyodwa imigqa flat, bese isiqeshana ebanzi imigqa eziyisithupha openwork iphethini.
Iphela obucayi doily ukukhilosha izigaba sesithathu nesesine. '
Uma kudingekile, susa noma yikuphi izakhi kusuka lewebhu usula ukuhlanza kufanele kube uchungechunge anezikhala ixhunyiwe noma iphethini lelula.
Ukwaluka indwangu izisusa
Isihloko esilandelayo inokubukeka original kakhulu futhi inqubo yayo yokukhiqiza kuyathakazelisa kakhulu.
Okunjalo openwork napkin hook eqhuma Motifs eziyisithupha ahlukene isiyingi, abese zenziwe ngendwangu eyodwa. Esikhathini umdwebo, izisusa enzelwe ngezinombolo 2-7. Kubalulekile ukuthi zonke izingxenye umkhiqizo zazinesilinganiso esifanayo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ulandele ngokucophelela ukungezwani ngentambo ngesikhatsi kokuhlinzwa futhi ukunitha kwabantu. izimbali ziyahlukahluka ngobukhulu ukunikeza umkhiqizo i ijamo engalingani.
Isinyathelo sokuqala ukuba uthole ukuthi uxhumanise uchungechunge ezintathu emoyeni iluphu (VP). Ngaphezu kwalokho openwork napkin hook kufanelekile elandelayo:
1) 6 amakholomu ngaphandle sc (sc);
2) 1 sc, VI 8, ibha yokuxhuma (SS) ngesikhathi 2nd VI liphindwe izikhathi 5;
3) 1 sc, EP 1 ngaphansi lwaleli enkulu obumbene 1 sc, 1 polustolbik, sc nge 4 ikholomu (CCH), 2 VI CLO 4, polustolbik 1, 1 sc, 1 VI. Phinda izikhathi 5.
Yilokho, isisusa usulungile. It silula, empeleni lakhiwe ngemalunga lamatsatfu chungechunge.
Uma usulungile eziyisithupha izingcezwana ezifanayo isiyingi, kubalulekile ukuba uxhumanise owesikhombisa, okwakuyoholela ukuxhuma bonke ku ishidi elilodwa. Le mbali isiqala obumbene nge amasongo 5 VP, lapho usebenza 12 SB N. Khona obumbene ezimbili izinhlobo izindwani: ezincane nezinkulu.
Small: 3 VP, yokuxhuma ikholomu igobela 3 VP unamathele VP 1st, Ezokuphepha N.
Big 5 VP, hook threaded ngaphansi amakhothamo angu ezimbili iyizingxenye izisusa obumbene nomunye VP 4, Ezokuphepha N.
Ukugxila kohlelo, kufanele uxhume nge amacembe kahlanu ngamunye. Lokho ngeke abe ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi napkin.
Crochet: openwork napkins. ukuvala shaqa
Eyokuqala isiyingi irowu ngombala iqala phezulu namanoni aphezu ka omunye Motifs isiyingi. Le nombolo izoxhumanisa Motifs ngaphandle kwendilinga:
1) 5 VI Sa H, 5 VI sc, 5 VI sc, 5 VI, ikholomu 2 sc (C2H) yokuxhuma eziqongweni iyizingxenye ezimbili, 5 VI C2H ukuze iphuzu elifanayo, 5 VI sc. Ukulandelana liphindwe izikhathi 5 ngaphezulu;
2) 5 VI Sa H, 5 VI sc, 7 VI sc, 5 VI sc, 5 VI sc, 7 VI sc. Phinda izikhathi 5;
3) 2 VI Pico 3-VI 2 VI sc, 5 CCH 2 Pico 3-vis 5 CLO, sc. Phinda izikhathi 11.
Kahle izenzo ababulawa kuzoholela yokuthi zonke izakhi ze-napkin ziyakusala ezitaladini indiza efanayo. Kufanele kube khona izingcezu ophumile bachezukisa amacembe.
Ready openwork napkins ngixhumane (izikimu kanye nencazelo kungenzeka okuqinile noma ubhala) kubalulekile geza hashaza umusi kusukela yensimbi. Impregnation imikhiqizo isitashi ngeke kuphela hamba, umusa wakhe, njengoba kulokhu, Sula uzobuyisa ezakheke kangcono.
Kanjani futhi yini ukupenda iphephandaba tube plaiting
Ukunitha bootees izinsana spokes - ngenalithi elula ngenkathi elinde ingane
Bruges lace: izikimu Wabasaqalayo. Bruges lace: napkins
I-Popular Lifan Smily: izibuyekezo, izici nezici ezikhethekile.
Indlela wean ingane kusukela kukhompyutha? Umthelela kukhompyutha impilo
Indlela yokusebenzisa amanzi ongcwele? Lapho ukudayela iziwasho? Okufanele ukwenze nge amanzi ongcwele?
Ukukhala dermatitis ezinganeni: isithombe kanye nokwelashwa